🥇 ▷ Sida loo rakibo barnaamijyada barnaamijyada ISO ✅
Sida loo rakibo barnaamijyada barnaamijyada ISO
Sida aad barnaamijyada uga soo dejiso feylasha ISO way ku kala duwan yihiin nooca Windows Waxaad isticmaaleysaa Aan aragno xulashooyinkaaga. PCMag si madaxbanaan ayey u fiirisaa badeecada, laakiin waxaan kasban karnaa gudiyo xiriir la leh annaga oo iibsanna iskuxirka ku yaal boggan. Shuruudaha isticmaalka.
Barnaamijyada barnaamijyada qaarkood, gaar ahaan kuwa waaweyn, ayaa mararka qaarkood loo qaabeeyaa oo loo bixiyaa sidii faylasha ISO. Windows barnaamijyada sida Microsoft Office.
Faylka ISO wuxuu ka kooban yahay dhammaan faylasha rakibaadda ee barnaamij, laakiin sidee baad u rakibtaa codsiyada faylka? ISOel? Hagaag taasi waxay kuxirantahay nooca. Windows Waad socotaa
Gudaha Windows 10 ama 8.1 Waad ku rakibi kartaa faylka ISO sida kumbuyuutar wadata oo waxaad halkaas ku rakibi kartaa software. Nooca hore ee Windows sida 7, Waa inaad soo dejisaa utility kuu rakiban kara faylka ISO adiga. Waxaad sidoo kale gubi kartaa faylasha ISO CD-ga ama DVD ama waxaad ku nuqulan kartaa USB USB ka oo aad ku rakibi kartaa disk ama drive. Haddii aad kala soo degto Windows 10 oo ah faylka ISO, waa inaad ku gubtaa DVD bootable ah ama aad koobi ugu sameysaa USB USB bootable si aad ugu dhejiso kumbuyuutarka aad u socoto. Aynu ka wada hadalno qaabkan kala duwan.
Muujinta sida: Bog bogga
Ku rakib faylka ISO Windows 10 ama 8.1
Windows 10 ama 8.1, soo degso faylka ISO. Fur Fure Explorer oo guji midigta guji faylka. Laga soo bilaabo menu pop-up, dooro amarka Mount.
Wadid wadis ah
Fur drive wadata dalwad ah oo aad ku rakibi karto barnaamij kumbuyuutar. Wadadaas casriga ah, waa inaad ka heshaa setup.exe ama fayl lamid ah si aad barnaamijka ugu rakibtid. Laba jeer guji feylka si aad u gashato softiweerka.
Ka soo saar diskiga casriga ah
Ka dib markii rakibida la dhammaystiro, xiro barnaamijka rakibaadda, haddii loo baahdo. Fure faylkaaga PC-ga Faylasha Explorer si aad u aragto dhamaan qalabka diskgaaga. Midig ku dhaji wadista qarsoodiga ah. (Waxay u badan tahay inay leedahay xaraf wadis D ama E, waxayna kuxirantahay qaabeyntaada.) Laga soo bilaabo menu-ka soo-baxa, guji Amarka Dukaanka. Tirtir barnaamijyada kombuyuutarka, inkastoo faylasha ISO ay wali nool yihiin oo ay wanaagsan yihiin.
Ku rakib faylka ISO Windows 7
Amarka rakibaadda waxaa keliya oo laga heli karaa Windows 8, 8.1 iyo 10. Haddii aad socodsiiso Windows 7, Waad u beddelan kartaa adeegsiga wadista baabuurta ee bilaashka ah. Barnaamij wanaagsan waa Virtual CloneDrive. Ka dib markii la rakibo furo u fur Windows soo socda ee Windows 7 oo guji midigta ISO faylka aad rabto inaad ku rakibto Laga soo bilaabo menu soo-baxa, guji amarka Mount (Virtual CloneDrive).
Waddo Virtual ah ayaa la abuuray. Daaqad yar ayaa u muuqata mid wax weydiineysa haddii aad rabto inaad socodsiiso faylka rakibaadda ama aad u furato galka wadha u gaarka ah. Xullo ikhtiyaarka si aad u maamusho faylka qaabeynta.
Meesha ka saar baabuurta aan tooska aheyn
Rakibaadda ayaa markaa sii socota. Ka dib markii aad ku rakibtid barnaamijka, midig guji faylka ISO ee Windows Explorer oo guji ‘Unmount’ menu pop-up si aad u tirtirto drive-ka kombiyuutarka.
Gub faylka ISO disk-ga
Fursadaha kale ee loogu talagalay rakibidda barnaamijyada faylka ISO waa in si fudud loo gubiyo faylka CD-ga ama DVD, ama koobi loogu diro USB USB oo halkaas laga rakibo. Tani waa hab waxtar leh haddii aad rabto inaad kaydiso barnaamijyada disk-ga aad ku rakibi karto nooc kasta. Windows. Tani sidoo kale waa ikhtiyaar aad isticmaali doonto haddii aad rabto inaad ku rakibto faylka Windows ISO mashiinka nadiifka ah.
In la gubo faylasha ISO Si aad u disho, ku dhaji CD faaruq ah ama DVD DVD drive disk disc ah. Fur Fure Explorer ama Windows Explorer Midig guji faylka ISO. Laga soo bilaabo menu pop-up, ka dooro taliska gubashada Image Disc.
Ku rakib diskka
Waxyaabaha ka badan Windows Qalabka loo yaqaan ‘Image Image burner tool’ wuxuu u muuqdaa waana inuu tilmaamaa CD / DVD drive. Guji batoonka Gubashada si aad u sii wadato. Gubasho galka ISO ee CD-gaaga ama DVD-gaaga. Dusha diskigaaga ayaa la furi karaa si aad u tirtirto diskiga.
Iyada oo ku xidhan qaabeynta rakibaaddaada, barnaamijkaaga waxaad ku rakibi kartaa disk-ga si otomaatig ah adigoo ku dhejinaya kombiyuutarka PC-ga ama adoo laba-gujinaya faylka qaabeynta sida ku cad File Explorer ama Windows Explorer.
Qalabka Windows USB / DVD Download Qalabka
Ikhtiyaar kale oo ku siinaya awoodda aad ku gubi karto ISO si aad u disho ama nuqul ugu dirto USB waa utility Microsoft bilaash ah oo loo yaqaan Windows USB / DVD download tool. Qalabkani wuxuu nuqulayaa waxa ku jira faylka. ISO illaa CD, DVD ama USB drive si aad barnaamijyo uga rakibtid disk ama USB drive, oo la bilaabi karo.
Tani waa hab wanaagsan haddii aad rabto inaad ku rakibto Windows 7, 8 ama 8.1 kumbuyuutar nadiif ah ama qayb ka mid ah galka kabaha. Qalabkaan ka soo qaad Xarunta Soo-dejinta ee Microsoft. Guji batoonka Dejinta ka dibna dooro luqadda aad ugu baahan tahay barnaamijka.
Orod qalabka soo dejinta
Ka dib markaad soo dejiso faylka Windows7-USB-DVD-Download-Tool-Installer.exe file-ka, midig u guji oo dooro Run sida xulashada maamulaha. Kadib rakibida bilow qalabka. Raadi oo dooro faylka ISO ee aad rabto inaad gujiso Guji Next
Xulo nooca warbaahinta
Tallaabada xigta, dooro inaad isticmaasho qalabka USB ama DVD.
Gali qalabka USB-ga
Haddii aad dooratid USB, shaashadda soo socota waxay ku weydiineysaa inaad geliso warbaahinta USB. Haddii aad haysato wax kabadan hal USB drive oo ku xiran PC-gaaga, hubi inaad doorato midka saxda ah. Markaas dhagsii bilow Nuqulinta.
Haddii USB drive wali ku jiro xog, waa laga saari doonaa. Guji Tirtirka USB Drive si aad meel ugu sameyso feylka Windows faylka Kaddib marka aad nuqul gasho faylka, aaladda ayaa kuu sheegi doonta in aaladda USB boot ay si guul leh loo abuuray. Kadib waxaad u isticmaali kartaa aaladda USB-gaaga inaad ku dhejiso barnaamijka.
Hadaad dooratid DVD, gali DVD faaruq ah wadistaada oo dhagsii Start Burning. Qalabkani wuxuu ku soo ogaysiin doonaa ka dib marka DVD-gu si guul leh u gubo. Waxaad hadda u istcimaali kartaa kombiyuutarkaaga boot-ka ah inaad ku dhejiso barnaamijka.